अजय रिसाल - कान्तिपुर समाचार
अजय रिसालका लेखहरु :
आफ्नै अन्तर्मनको विज्ञप्ति : नचाहिने नै हुन् त डा. गोविन्द केसी ?
छोडिदिउँ उनका केही मागमा राजनीति घुसेको–घुसाइएका कुरा । बिर्सिदिउँ उनलाई 'एक्ला बृहस्पति' झैं झुठा ठहर्‍याइन लागिएको कुरा । उनी ढीट, कठोर, 'कुरा नबुझ्ने', अनि कसै कसैले भनेझैं 'पागल' नै पनि भए होलान् (तिनका लागि) । अहिलेलाई यी सब कुरालाई पनि थाती नै राखौं । तर, एकपटक छातीमा हात राखेर सोचौं त, 'हामीलाई नचाहिने पात्र नै हुन् त डा.गोविन्द केसी ?'
मनोविमर्शद्वारा घटाउन सकिन्छ आत्महत्या
एक हप्तायता ‘आत्महत्या’ का समाचार तारन्तार आइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीको रिपोर्टमुताबिक दैनिक १९ व्यक्तिले आत्महत्या गरी ज्यान गुमाइरहेछन्, नेपालभित्रै ।
महामारीको मनोसामाजिक पक्ष
चीनबाट तीन महिनाअघि सुरु भएको कोरोना भाइरसले अहिले विश्वव्यापी रूप लिइसकेको छ । १२० भन्दा बढी देशका लगभग २ लाख मानिस यस भाइरसबाट प्रभावित छन् । त्यस्तै १० हजार बढीको ज्यान गइसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो कोरोना भाइरससँग जुध्न सारा विश्वलाई नै आह्वान गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा कोरोना महामारीको मानसिक वा मनोवैज्ञानिक पक्षमा यो लेख केन्द्रित छ ।